« Rehefa maty, dia maty» : ny COVID-19 sy ny fanokafana indray ny toekarena ao Jamaika · Global Voices teny Malagasy
Ny toetra amam-panahin-dry zareo Jamaikàna dia mirona mankany amin'ny fahafatesana.
Nandika (fr) i MOTTET MALCORRA
Voadika ny 20 Mey 2020 15:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, українська, русский, Español, Nederlands, English
Ny Pelican, toerana fisotroana an'i Floyd, ao Black River, Jamaika. Sary an'i Karl Stanton, nampiasàna lisansa CC BY-NC-ND 2.0.
Ny lahatsoratra niandohana tamin'izy ity dia nivoaka tao amin'ny bilaogin'i Petchary.
« Rehefa maty, dia maty. »
Ny toetra amam-panahin'ny tsirairay amin-dry zareo Jamaikàna dia mirona mankany amin'ny fahafatesana daholo. Indraindray aza dia tonga mihitsy amin'ny hoe manainga soroka ny olona no sady miteny hoe « Suh it guh » (Izay no fandehany / Izay izany !).
Amin'izao vanimpotoana misy valanaretina COVID-19 izao, vao mainka nihamafy io fironana io. Ny teny hoe « dirt » (vovoka, fa nadika ho fahafatesana ato anaty lahatsoratra) dia entina manondro ny fahafatesana. Araka ny lazain'ity fomba fiteny etsy ambony ity (misy betsaka any anatin'ireo ohabolana ao Jamaika), tsy maintsy ho faty ihany indray andro any. Mitovy ihany na ianao matin'ny hanoanana, noho ny fitontonganan'ny toekarena, na noho ilay viriosy. « Ndeha isika hanao kinanga ka hiatrika ilay viriosy. Farahafaratsiny, mba mahazo vola isika. Rehefa maty, dia maty. », izany no marimaritra iraisan'ny sasantsasany.
Ny fahatsapàko tato ho ato, tonga tamin'ny famintinana tahaka izany ny governemanta jamaikàna, ary efa mizotra manatona mankany. Ny fitantanan'i Andrew Holness dia manosoka hevitra hisafidianana “na pesta na kolerà”. Niezaka izy ny « hitady izay hampifandanjana ny aina sy ny fomba hivelomana », araka izay tadiavin'ilay fomba fisaina ny COVID-19 rahateo. Saingy noho ny antony marobe, tsy azony atao ny manapaka tsy misy fetra ny fihodin'ny toekarena, ary ao anatin'ny fientanentanana tanteraka ao Jamaika, indrindra fa ny sehatra ivelan-drafitra matanjaka be ao aminy. Mety hisy ny hatezerana, hatramin'ny korontana aza. Tsapa ny famoizampo. Azoko antoka hoe isanandro ireo solotena ara-politika no mandre ny hoe : « Noana izahay ! ». Masiaka be izany, tena zavamisy iainana. Avy eo misy ireo fifidianana efa manangasanga ery am-paravodilanitra. Araka izany, tapaka ilay « fifandanjàna».
Koa ny alin'ny 12 May, hentitra ny tafa ho an'ny gazety nataon'ny kabinetran'ny praiminisitra, ary mety hisy fiantraikany goavana. Toy ny hoe tratrantsika ny teboka tsy ahafahana mivelona intsony ho an'ny toekarena, indrindra fa ireo orinasa kely sy madinika eto amintsika. Na ahoana na ahoana anefa, tsy maintsy isika « misokatra » vonjimaika, miala amin'ny fihibohana ka mamela ny fiainantsika ho entin'ny kisendrasendra. Raha ny marina, tsy tena nanakatona tanteraka ireo orinasa kely sy madinika isika. Kanefa, ireo mpivarotra, ireo mpamily taxi ary ireo olona marobe izay miaina eny anjoron'ny fahantràna, na efa nandingana ny tokonan'ny fahantràna, dia nitohy nizaka fijaliana tafahoatra.
Izany no zavamisy amin'izao fotoana izao, izay hiova tsy ho ela : nikatona ireo toerana fivorivorian'ny olona, afa-tsy ireo tsena lehibe (supermarchés) sy ireo « BPO » (orinasa misahana antso) nanam-pitahiana manokana. Miala aina ny indostrian'ny fizahantany, toy ireo orinasa mifamatotra amin'io sehatr'asa io rahateo. Nilaza ny minisitry ny fizahantany, Ed Bartlett, nandritra ilay tafa ho an'ny gazety, fa tsy hoe ela dia ho ambarany ny daty « fisokafana indray » [ho an'ireo hetsika ho an'ny fizahantany]. Mazava loatra fa tsy maintsy ho arindra miaraka amin'ny fanokafana indray ny sisintany izy io. Voatery niditra tamin'ny fampiatoana ny hetsika momba ny fizahantany ny governemantantsika, izay tsy dia narisika loatra hampiato ny 95% amin'ireo indostria mpivarotra dia/fivezivezena, sy hatramin'ireo orinasa fitaterana an'habakabaka ary sambo mpitondra mpizahatany.
Nandritra ilay tafa ho an'ny gazety, nomena dimy na folo minitra teo ho eo ny minisitry ny fahasalamàna sy ny hasambarana, minitra nanehoan'ity lehiben'ny mpitsabo ity fahatoniana sy fahitsiana, toy ny efa mahazatra azy. Ny ambiny tamin'ilay tafa izay naharitra teo amin'ny ora roa teo dia naompana tamin'ny fanazavàna tamin'ny antsipirihany nataon'ny praiminisitra momba ireo fetra iharan'ny fihibohana, any amin'ny faritra ambanivohitra ao St. Mary, ao amin'ny tanànan'i Annotto Bay sy ireo manodidina azy, narahana fanazavana iray hafa sarotakarina momba ireo ora tsy ahafahana mivezivezy, izay nohalefahana (manomboka ny Alarobia alina, dia hahazo fanampin'ora roa malalaka isika ny alina, ary ora iray fanampiny ny maraina : izany hoe manomboka amin'ny 8 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina). Farany, ny minisitry ny fitantanambola no nanome ny fanazavàny antsipirihany mahazatra momba ireo fepetra fizaràna ny fanampiana any amin'nireo vondrompiarahamonina tena marefo indrindra. Ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety dia nahafahana nanangona torohay marobe tena ilaina, ary koa valiny manjavozavo.
Avy eo nambaran'ny praiminisitra Andrew Holness fa taorian'ny nihaonany tamin'ireo mpitari-pivavahana, noraisiny ny fanapahankevitra hanokatra ny fiangonana, ireo trano fisotroana, mandritra ny « fotoana fizahan-toetra » haharitra roa herinandro. Eny e, lazaina marina fa ao Jamaika, lazaina fa eo ankilan'ny fiangonana iray dia misy trano iray fisotroana (na ny mifamadika amin'izay).
Mazava fa tsy namokatra ireo ezaka ho fampanajàna ny elanelana ara-tsôsialy, ary ireo fiangonana sy ny trano fisotroana no toerana roa izay, amin'ny ankapobeny, falehan'ny olona sy fifaneraserany araka izay tiany : sady izao e, toerana tena fifanereserana sôsialy goavana ireny. Raha ny filazan'ny praiminisitra, misy tsy latsaky ny 10.000 ireo trano fisotroana ao Jamaika (ary azoko antoka fa mbola vinavina ambany izany) ary Andriamanitra irery no mahalala izay isan'ny fiangonana ao amin'ny nosy. Henoko nisy nilaza fa eo amin'ny 2.000 hatramin'ny 3.000 eo no misy ao. Averina indray, mety mbola ambony lavitra noho io no isa.
Betsaka ireo fanontaniana tsy misy dikany (nefa tsy azo lazaina loatra ho tsy mahataitra) tonga ao an-tsaiko : ahoana moa izany no hisotroana nefa sady hanao arotava ? Tsy manana lakozia ve ireny toerana fisotroana ireny, toerana izay ikarakaràna sakafo, ary toerana iray azon'ny olona isakafoanana ? Tena hahavita hiaritra tsy hipetraka ve ny olona mba hilalao daomy ? Tsy hifamihina tokoa ve ireo olona handeha any am-piangonana na hifandray tànana ho mariky ny fahalemana ? Iza no hanakana an-dry zareo tsy hanao izany, raha toa misy izany? Iza no hanara-maso ireo toerana an'arivony maro, ary iza no handeha hampihatra ny didy, izay betsaka no tsy voahajan'ny ankamaroan'ny olona akory?
Any amin'ireo toerana toy ny tsena sy any ivelan'ireo biraon'ny Western Union any amin'ireo tanàna isankarazany ao amin'ny firenena, ohatra (haraton'aina ho an'ny ankabeazan'ny Jamaikàna ny famindràna vola ataon'ny avy any ivelany), manohy ny kivorivory ny olona. Ary raha tsy maintsy hanome tombatombana manakaiky ny tena izy aho, miankina amin'izay hitako, manaraka ny fomba fitantaràna, any amin'ny fahitalavitra sy nandritra ireo fitsangantsanganako, dia angamba 30% monja amin'ny vahoaka no mitondra arotava. Ireo izay manao izany, dia mazàna, no tsy mitondra azy araka ny tokony ho izy akory.
Manomboka eto ny hany azon'ny governemanta atao dia ny « miangavy » ireo Jamaikàna sy « manosoka hevitra » azy ireo mba hitondra tena toy ny olona tomponandraikitra sy misaina ary hanaja ireo fepetra, mba hahafahan'ny rehetra mianatra « miaina miaraka amin'ny COVID-19 », no sady miroso hatrany. Kanefa, maro amintsika no tsy mahavita izany, na tsy te-hanao izany, tsy te-hihaino na handre ireny fampitandremana ireny. Ny fandrafetana fanovàna fitondrantena dia dingana lavitr'ezaka, manorisory sy tena resaka teknika be. Tsy ho tampotampoka eo izany dia ho vita. Tsy hisy fiantraikany raha izay fangatahana fotsiny ny olona mba hahay hitondra tena, mandritra ny tafa iray ho an'ny gazety alefa fahitalavitra izay azo antoka fa ny antsasaky ny vahoaka no tsy nijery azy akory.
Miaraka amin'ny fialàna amin'ny fihibohana, hiverina amin'ny andavanandro ny toedraharaha. Tsy mino aho hoe ho « andavanandro vaovao » io, fa dia andavanandro fotsiny e. Azo lazaina ho efa ao anatiny isika izao.
Betsaka no voalaza momba ny « fitantanana » ilay viriosy. Eny ho'aho Atoa. Andrew Holness sy al., mba misy zavatra lazaiko anareo. Zavatra iray nianarantsika avy amin'izao tontolo izao, dia ny hoe tsy voafehin'ny olombelona ilay viriosy ; fa ilay viriosy no mifehy antsika. Ny ataontsika rehetra dia ny miezaka mizaka izay midona, miaina miaraka aminy, ny mihetsika, tsy manao afa-tsy ny miatrika tsy am-piomanana, manantena sy mivavaka . Na ny filoha Trump aza, izay resy lahatra ho toy ny andriamanitra na mpanjaka iray, dia efa mahita ilay viriosy mivezivezy ao amin'ny Trano Fotsy, tsy misy na inona na inona azony atao amin'izany..
Azontsika atao ny manana izao karazana tetikasa rehetra erantany izao sy mihevitra fa mahafehy isika. Saingy « ny zavamisy sy ny fotoana no hanambara amintsika », toy ny filazan-dry zareo Jamaikàna azy.
Eo am-piandrasana izany, ndeha isika hisaintsaina ny sorabaventy iray nasandratra androany teo anoloan'ny parlemantam-panjakana tao Florida, nandritra ny fihetsiketsehana iray : « Tsy mpanjifa mihitsy ny faty. »